Ikhaya / Blog / Kutheni le nto amagumbi okuhlambela abanye abantu ehlala ekhangeleka emhle kangaka?
2021 / 04 / 12 uhleloBlog 4720 0
Abantu abaninzi bajonge eyabo indlu emva kokuyilungisa, ze bayithelekise nabanye, bahlala beziva ngathi abanye abantu bangcono kunokubukeka kwabo, ngaba le yindlela abasabela ngayo “kwabanye abantwana babanye abantu”? Namhlanje siza kujonga umhombiso wabanye abantu wokuhlambela, ngaba ungcono ngenene kunamakhaya abo?
1, Umhlaba ogangathiweyo kwiithayile ezinamacala amathandathu, intle. Iindonga ziithayile ezimhlophe ngokufanayo, ezenza igumbi lokuhlambela livuleke ngakumbi kwaye liqaqambe. Imifanekiso exhonyiweyo, isinki yeplanga, isipili esihle, izibane zodonga, njl., Uhombiso lonke lwenza igumbi lokuhlambela libe nemoody.
2, Udonga olunethayile yeenkozo zomthi, umphumo ukwangobuqu obugqithisileyo, kwangoko wenza esi sithuba sombala okhanyayo, ujongeka ngokwahlukileyo. Cwangcisa iiches ezindongeni, zilungele ukubeka izinto zokuhlamba, ukugcina umhlaba usebenza kwaye umhle. Ukuhonjiswa ngamalungiselelo eentyatyambo, ezele sisimbo.
I-3, Indawo yokuhlambela inkulu, nokuba ungacwangcisa njani, ukusebenza kwayo akukubi kakhulu. Faka iishelufa ezimbalwa ezindongeni, ngoko nangoko unendawo yokubeka izinto, ezantsi iibhasikiti ezimbini zokugcina zilungile nazo oh.
I-4, iithayile zomthi, ezidityaniswe neethayile ezingwevu ngokudityaniswa, kujongeka ngathi kulungisiwe.
5, Gray ithoni yendawo, ayenzanga ukuba abantu bazive bedandathekile, kodwa endaweni yoko bajonge kakhulu. Ngokukodwa iindonga zokuntywila, izinto ezisetyenzisiweyo, imvakalelo ebusy, enesitayile kakhulu kwaye enesitayile. Isinki yokuhlambela engaqhelekanga esinkini, kwaye ecaleni komhombiso weentyatyambo, kuyo yonke indawo inokubonisa isitayile.
I-6, udonga lukwimibala emibini, aludandathekisi kwaye luyinto engathandekiyo, lugcwele ubume, kwaye umhlaba uvalwe ngeethayile zeentyatyambo, iba yeyona nto iphambili kuyo.
7, Umhlaba uthayile iithayile ezimnyama ezinamacala amathandathu, iithayile ezimhlophe ezindongeni, mnyama nomhlophe, umbala omdaka
I-8, i-Pink egqibeleleyo kunye nesinki entle iyatsala. Nayiphi na indawo kwigumbi lokuhlambela icwangciswe kakuhle, iya kwenza ukuba kukhanye konke!
9, Ukugcinwa kuyamangalisa!
12, Iindonga kunye nomgangatho onethayile efanayo, ubume bendalo, ujongeka upscale. Indlu yangasese emhlophe exhonywe eludongeni kunye nebhafu yokuhombisa enesitayile esimhlophe esincinci kwindawo engwevu, ikhangeleka ingcono.
Ngaphambili :: Igumbi lokuhlambela elinye lanele, kutheni ufuna amagumbi okuhlambela amabini e-China? next: La magumbi okuhlambela nawo aXabiso liphezulu, Ngaba uwabonile onke?
2021 / 04 / 11 4151